Izifundo Ezi-7 Ezinenjongo Zokuphila Ongazifunda 'Kuqhakaza Kuwe' - Okunye
Izifundo Zokuphila Ezinenjongo Ongazifunda 'Kuqhakaza Kuwe'
Uma kukhona noma yini enqatshelwe, noma ngisho ebukelwa phansi ngamahloni nokunengeka, kunjalo ukuba yisitabane. Noma ukukhangwa ngokocansi kothile ngokufanayo ubulili.
Lena ingqikithi eyinhloko ku Qhakaza Kuwe. Yinto eyodwa eyenza izifundo zempilo zibe nenjongo futhi zibuye ziphindaphindwe.
Futhi lokho kuyiqiniso noma kunjalo awushintshi ngaleyo ndlela wena.
Umlingiswa oyinhloko: Yuu futhi inezifundo azifundayo, ngoba ulwela ukuthola ukuheha abantu abaningi.
Bloom Into You Life Izifundo:
1. Umuntu onesibindi ebusweni, ujula ukungazethembi
UTouko Nanami ungumongameli womkhandlu wabafundi.
Ingasaphathwa eyokuthi “umuhle” umongameli womkhandlu wabafundi emehlweni alabo afunda nabo kanye nalabo asebenzisana nabo.
Konke okwenziwa uTouko kuphelele. Amabanga, izivivinyo, indlela akhuluma ngayo futhi akhulume ngayo nabanye… Kucishe kube sengathi ukubukela uTouko esebenza, kukhombisa ukuthi yini “ukuphelela” okufanele ukubukeka.
Noma njengoba beyibiza kanjalo: 'izinkondlo ezinyakazayo'.
Kepha yilabo kuphela abasondelene noTouko, njengoYuu, abazi iqiniso lendaba.
Ubuso bukaTouko obunesibindi futhi amakhono obuholi aqinile yisici esifihlayo kuye kujule ukungazethembi.
Uhlobo lokungazethembi olungaze lubonakale ngenxa yokuthi unesibindi, ujolly futhi unemibalabala ubuntu bakhe bubonke. Ukungakhulumi ngesimo sakhe esikhanyayo, sokungahluleli kwabanye.
Kuyafaneleka: Abalingiswa be-Anime Abamnene Kakhulu Kuyaduduza
2. Awukwazi ukusiza ukuthi ubani noma yini oyithandayo
Kukhona le nkolelo yokuthi uma ungungqingili noma ungungqingili, uvuke nje ngolunye usuku futhi wanquma ukuba yisitabane.
Iningi labantu alikwazi ukusonga ikhanda lalo ngenxa yokuthi kuyindida ukuthi, abantu abafanayo abahlulekayo abakhangwa ngokobulili ngobulili obufanayo. Ngakho-ke kunjalo abakwazi ukuqonda.
UTouko Nanami uyakwazi lokhu ungcono kunanoma ngubani ku-anime: Bloom Into You.
Ngelinye ilanga uwela kuYu, futhi ukuphela kwalokho.
Uthola ukuthi “ungena emantombazaneni” futhi akukho angakwenza ngakho. Ngenkathi azi umhlaba ongaphandle kwakhe ngeke awubone kanjalo, uma kwakufanele bathole imfihlo yakhe.
Lokho kungiholela ephuzwini lami elilandelayo…
3. Siphila emphakathini ongavumelani
Iqiniso ukuthi - 'ngokujwayelekile', i-joe yakho ejwayelekile ivaliwe futhi ayazi umhlaba nokuthi usebenza kanjani.
Iningi labantu alizemukeli izinto 'ezihlukile', uma kuqhathaniswa nezinto eziyikho esetshenzisiwe ukubona nokuzwa.
Lokhu kuyiqiniso nasendaweni yothando, ezothando nezobudlelwano. Ngaphezu kwalokho kunezinye izindawo.
Akunandlela yokuthi iningi labazali belingemukela eyabo ingane UMA belazi ukuthi bangama “Lesbians”.
Eqinisweni - iningi labazali lingakuphika futhi lithi 'uqalekisiwe' noma enye inkunzi **.
Kwangathi uNanami, nabesifazane abambalwa abadala ku Qhakaza Kuwe yazi lokhu. Ungakubona ngendlela abaphila ngayo izimpilo zabo. Ukugcina ubudlelwano babo 'bobungqingili' buphansi, beqikelela ukuthi baqinisekisa ukuthi akekho obonayo.
Zonke iziqephu eziyi-12 zeBloom Into You ziveza leli qiniso ngendlela ecashile, kodwa engenakuphikwa.
Okuhlobene: 5 Izifundo Zokuphila Ezingasoze Zalibaleka Okufanele Zifundwe KuShimoneta
4. Uthando lukwenza ube nobugovu
Uma uthandana nothile, uba nobugovu. Uyazikholisa ukuthi konke kumayelana umuntu omthandayo, kepha iqiniso lithi: konke kumayelana nani.
Uthando lwakho ngomunye umuntu kukushayela ukwenza izinto ezizokwenza yanelisa izifiso zakho kanye nezidingo zakho. Hhayi izidingo zomuntu omthandayo.
Uzobona okuncane kwalokhu phakathi kukaTouko Nanami noYuu, njengoba uTouko ngobugovu efuna izimfuno zikaYuu. Njengokuthi 'ungangithandi, hlala unjena'.
Uthando alwazi ukuzithambisa uma seluqhakazile futhi seluthatha ingqondo yakho. Ngakho-ke ukucela umuntu ukuthi ahlale enjalo, kuyilapho egeza othandweni analo ngawe ngocansi, cishe akunakwenzeka .
Ngoba imizwa ayinangqondo.
Ubufakazi balokhu sibubona njengoba uYuu eqala ukuthuthukisa imizwa kaTouko Nanami engxenyeni yesibili ye- Qhakaza Kuwe.
5. Uma izintshisekelo zakho 'zingamathebhu' kakhulu, kulapho uzokhathalela ukuthi abantu bacabangani
Lokhu akulona iqiniso ngaso sonke isikhathi.
Kunabantu abafunda ukunganiki u-F noma iyiphi indlela. Kepha masithembeke: iningi labantu liphuka ngaphansi kwengcindezi. Ikakhulukazi uma izintshisekelo zakho zivela kokujwayelekile.
Lokho akulona iphutha labantu, kuyiphutha lomphakathi ukungavumelani nokukhetha UKUNGABI nozwela nokuqonda.
UTouko Nanami ubeka ubuso obunesibindi kodwa ukungazethembi kwakhe kujula kakhulu kunomfula iNayile.
Futhi noma engakwenzi kucace kwintsha yansuku zonke noma kubantu abadala, ukukhathalela kakhulu ukuthi abanye abantu bazocabangani ngaye. Ukube bebengathola imfihlo yakhe 'yethabhu' yokuba yisitabane.
Phakathi kwezinye izinto.
Lokho kuyiqiniso nasempilweni. Kuliqiniso elingenakugwenywa.
6. Kunzima ukuthola abangane abazoku 'kwamukela' uma wehlukile
Lokhu kubuyela emuva kukhomba # 3 ngabantu abavulekile emphakathini. Futhi ukhombe # 5 ngokuba nezintshisekelo ezingavamile.
Kungenzeka kangakanani ukuthi uthole umngane ongamthola ukwethemba uma ungungqingili noma ungungqingili? Ukusabela kwabantu ngokwemvelo ukuthi baziphathe njengezimvu, futhi bakhombe ngeminwe “izimvu ezimnyama” ezigqamile phakathi kwesixuku.
Futhi yilokho akunandaba yokuthi buyini ubuhlobo bakho nabo noma obabunabo ngaphambili.
Ngaphandle kukaYuu, uTouko Nanami unayo akekho ongaphendukela kuye mayelana nezifiso zakhe zocansi zobungqingili. Akakwazi ukutshela abazali bakhe, umndeni, abangane noma labo ahlangana nabo.
Lokhu kumbeka esimweni esikhohlisayo, ngoba ngokumangazayo, noma ngabe abangane bakhe bebazi, cishe akekho noyedwa kubo 'onamathela' eceleni kwakhe naphezu kwakho.
I-anime ayilenzi lacaca leli phuzu, kodwa iqiniso elicashile elivezwe kuso sonke isakhiwo sika Qhakaza Kuwe.
Okuhlobene: Abalingiswa be-Anime abathatha 'Ukuba yi-Eccentric' ezingeni elisha lonke
7. Abantu abaningi banezimfihlo abantu “abambalwa” abazokwazi ngazo
Ukubuyela emuva kuphoyinti # 5, lapho izintshisakalo zakho zingajwayelekile, mancane amathuba okuthi uzotshela othile ngakho. Futhi lokho kuhamba nephuzu # 7 - kuzogcina sekuyimfihlo ongasoze wabelana ngayo nomunye umuntu.
Noma okungenani: 1 noma 2 abantu obathembayo ngokuphelele bazokwazi ngakho. Kepha akukho ngaphezu kwalokho.
Ku-anime, Kwangathi uNanami wabelana ngemfihlo yakhe no-Yuu, kodwa isizathu sisobala… Kungenxa yokuthi uTouko uthandana no-Yuu. Ngakho-ke kungokwemvelo ukuthi ubezokwazi.
Ukube bekungekho ngenxa yaleso sizathu, akekho omunye umuntu obengazi ngakho.
Isibonelo esingcono salokhu ngu Sayaka. Umngani kaTouko futhi iphini likamongameli womkhandlu wabafundi.
Sithola ukuthi uthandana noTouko Nanami. Kepha ngokungafani noTouko ozimisele ukuphuma ekhabethe nomuntu amthandayo, Athi ukuthula uSayaka.
Ukhetha 'ukuthanda' uTouko ukude, angalokothi asho noma akhombise lutho kuTouko. Noma ngisho nokwabelana ngemfihlo yakhe nanoma ngubani osondelene noTouko, ngisho noYuu.
USayaka ukuphela komuntu emhlabeni ngubani owaziyo ngemfihlo yakhe. Ngakho-ke unesizungu, uphoqelekile ukuba alwe nakho konke eyedwa kungekho omunye ongabelana naye.
Futhi kunengqondo: bambalwa abantu abazokwabelana ngemfihlo bazi ukuthi bazokwahlulelwa futhi bagxekwe ngayo.
Ikakhulukazi uma inamandla oku incithakalo ubungani.
Umuntu onesibindi ebusweni, ujulisa ukungazethembi.
Awukwazi ukusiza ukuthi ubani noma yini oyithandayo.
Siphila emphakathini onomqondo ovaliwe.
Uthando lukwenza ube nobugovu.
Lapho izintshisekelo zakho ziyi 'taboo' ethe xaxa, uzokhathalela kakhulu ukuthi abantu bacabangani.
Kunzima ukuthola abangane abazoku 'kwamukela' uma wehlukile.
Iningi labantu linezimfihlo abantu abambalwa abayokwazi ngazo.
Yini oyithathe ochungechungeni lwe-anime: Bloom Into You?
Izifundo Ezi-5 Zokuphila Okulula Ongazifunda K-On!
Kwama-Anime Ajabulisa Kakhulu